पारस शाह: पूर्वयुवराजले ‘प्रहरीलाई धकेलेको’ विषयमा यसरी हुँदैछ छानबिन – PanchKhal Online
Home/समाचार/पारस शाह: पूर्वयुवराजले ‘प्रहरीलाई धकेलेको’ विषयमा यसरी हुँदैछ छानबिन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्ष बाहिरबाट भित्र जाँदै गरेको देखिएका भूतपूर्व युवराज पारस शाहले त्यहाँ खटिएका एक प्रहरी अधिकृतलाई धकेलेको जस्तो देखिने भिडिओको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा अझै सेलाइसकेको छैन।
कोमल त्यतिबेला स्वास्थ्य परीक्षणका उपचारका लागि थाई एअरवेजको उडानबाट थाईल्यान्डको राजधानी ब्याङ्कक जान लागेकी थिइन्। पूर्वराजपरिवार बस्ने निर्मल निवासका एक अधिकारीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि केही समयदेखि थाईल्याण्डमै छन्।
विमानस्थलमा खैलाबैला किन भयो? “उहाँ पछिपछि र छोरा अघिअघि भीभीआईपी (अतिविशिष्ट कक्ष) मा जाने बेलामा प्रहरीले पास खोज्नुभएछ। त्यतिबेला धकेलिएको रहेछ भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ,” त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाल प्रहरी टोलीका प्रमुख डीआईजी सूर्य उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।
उनका अनुसार आइतवार भीभीआईपी कक्षबाहिर खटिएका प्रहरीले पूर्वयुवराजको छोरा हृदयेन्द्रको पास भए नभएको जाच्ने क्रममा त्यो घटना भएको रहेछ। उनले भने, “त्यहाँ खटिएका प्रहरीले पनि यसलाई ठूलो मानेका छैनन्। सामान्य घटना हो।”
अतिविशिष्ट कक्ष के हो? नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायधीशजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिले विमानस्थल भित्र जाँदा वा बाहिरिँदा भीभीआईपी कक्षको प्रयोग गर्छन्। विदेशबाट त्यो दर्जाका अती विशिष्ट पाहुनाले पनि त्यो कक्षको प्रयोग गर्छन्।
“तर नेपालका पूर्वराजालाई पनि त्यो सुविधा दिने गरिएको रहेछ,” उपाध्यायले भने। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवनको दक्षिणतिरको पहिलो तल्लामा भीभीआईपी कक्ष रहेको छ। “आइतवारको घटना त्यो कक्षदेखि मुनितिर भएको रहेछ, जहाँ पूर्वयुवराजका पछिपछि उनका अरू सहयोगी र समर्थकको पनि भिडभाड रहेछ,” उपाध्यायले भने।
छानबिन कसरी हुँदैछ? डीआईजी उपाध्यायका अनुसार आइतवारको घटनाको छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमै कार्यरत एक एसपीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको छ।
त्यो समितिले घटनाको बेला विमानस्थल कार्यालयले पूर्वयुवराज र उनका सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यक्तिलाई पास दिए नदिएकोदेखि लिएर घटना के कसरी भयो जस्ता विषयमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनको प्रतिवेदन कहिले आउँछ? डीआईजी उपाध्यायका अनुसार छानबिन गर्न अझै केही दिन लाग्छ।
उनले भने, “यो धेरै ठूलो घटना त होइन। यसबारे अनावश्यक चर्चा भइरहेको छ। हाम्रो प्रहरी नै पीडित भएको देखिन्छ। तर हाम्रो आन्तरिक छानबिन चलिरहेको छ। त्यसको निष्कर्ष चाँडै आउँछ।” पूर्वयुवराज पारसले प्रहरीलाई हातपात गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई केहीले कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
केहीले भने प्रहरीले नै दुर्व्यवहार गरेकाले उनले आक्रामक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरेका छन्। पारस शाहको नाममा खोलिएको एउटा फेसबुक पेजमा विमानस्थलको घटनामा पूर्वयुवराजले माफी माग्दै सन्देश लेखेको देखिन्छ। तर सो खाताको आधिकारिकता बीबीसीले पुष्टि गर्न सकेको छैन।